မိမိကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » မိမိကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Sep 30, 2011 in Know-How, DIY |7comments
မိမိကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ လိုတယ် ရွှေအိမ်စည်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ ။ မာသားထရီဇာတို့ ၊ မဟာဓမ္မဂန္ဒီ၊ သမ္မတ လင်ကွန်းတို့လို သမိုင်းမှာ လူတွေရဲ့ကြည်ညို လေးစားခြင်းကို ခံရတဲ့ သူတွေဟာ ရုပ်ရည်လည်း မချောကြပါဘူး ၊ဥာဏ်ပညာလည်း အထူး ထက်မြက်တဲ့ သူတွေ မဟုတ်ကြ ပါဘူး။
ရုပ်ရည်ချောတာ ဥာဏ်ကောင်းတာ တွေထက် ကျွန်မတို့ တန်ဖိုးအထားဆုံး အရာတွေက
တကယ်တမ်းသာ ကျွန်မတို့လိုချင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို ဒီလို အရည်အချင်းတွေ ရလာ နိုင်ပါတယ်။
မိမိကိုယ့်မိမိ ရိုသေ လေးစားပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရိုသေ လေးစားမှုနဲ့ တခြားလူက ကိုယ့်ကို ရိုသေလေးစားဖို့ အတွက် ဥာဏ်ပညာ ထူးချွန်ထက်မြက်နေဖို့၊ ရုပ်ရည်ချောမော ဖြစ်နေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ တော့လိုပါတယ်။
ကြေကွဲစရာ အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါ(သို့ )အားလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ(သို့ )ချစ်သူကစွန့်ပစ်သွား တဲ့အခါ(သို့ )အားငယ် စိတ်ပျက်နေတဲ့ အခါ (သို့ )ကျွန်မတို့ လုပ်သမျှအရာတိုင်းမအောင်မြင်တဲ့ အခါ ကျွန်မတို့ အများဆုံးမေးဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းတွေက
.လို့မေးခွန်းတွေမေးခြင်းဟာကကျွန်မ တို့ စိတ်ကို ရူးသွပ်သွားစေပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမှာ အဖြေမရှိပါဘူး။
လောကမှာ အကျိုးရှိအောင် နေတတ်သူတွေဟာ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုမမေးကြပါဘူး။
ဘယ်သူ့ ကိုမှလည်းအပြစ်တွေ တင်မနေတတ်ကြပါဘူး..။
ဘာ ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပဲ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ပြန်လည်ဆန်းစစ် တက် ကြပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ငါဘာတွေ သင်ခန်းစာရလိုက်သလဲ………’
မျှော်လင့်ချက်ကင်းနေတဲ့အခါ အခြေအနေပြန်ကောင်း လာအောင် ငါဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ…
အောင်မြင်သူ လူအများစုကလည်း သူတို့ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဘ၀တွေကို ကံကောင်းတိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုတည်းနဲ့ရောက်ရှိလာကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လောကမှာအောင်မြင်နေသူတွေ ရဲ့ စိတ်သဘောထားကိုဂရုတစ်စိုက်လေ့ လာကြည့်ပါ။ အောင်မြင်နေသူတွေ ရဲ့ ဘ၀ဟာလည်း သင်လိုငါလို ပါဘဲ။ မအောင်မြင်ခင်မှာတော့လောကဓံ ရဲ့ ရိုက်ပုတ်မှုတွေ၊အဆင်မပြေမှုတွေ နဲ့ ရင်းနှီးနေခဲ့ ရမှာပါ..။
ကျွန်မတို့ ကိုယ် ကျွန်မတို့ ပြန်လည်ဆန်းစစ် ဖို့ လိုပါတယ်..။ ထိုဆန်းစစ်မှုမရှိမှသာ ကျွန်မတို့ လိုချင်ရာပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာသာဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုလူတွေ အခုထိဘာကြောင်းတမ်းတနေတာလည်း…့ ။
မာသားထရီဇာတို လူတိုင်းက ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်တာလည်း၊
မဟာဓမ္မဂန္ဒီကိုရော..ဘာလို့ နောက်ထပ်တစ်ယောက်မတွေ့ နိုင်ရတာလည်း၊
သမ္မတ လင်ကွန်းတို့လို လူမျိုးလူတွေဘာကြောင်မျော်လင့်နေကြတာလည်း……..
ကျွန်မတို့ ဘုရားလောင်း မဟာဇနက္ကမင်းသားဟာ ပင်လယ်ထဲ သဘောင်္နစ်တာလည်း သာဓကတွေ ရှိသေးတယ်နော်…
အများသူငါ လူ တွေလို အုတ်အော်သောင်းနင်းမဖြစ်ဘဲ..ငါဒီသင်္ဘောနဲ့လိုက်လာမိတာမှားပြီ၊
အစာရေစာဝအောင်စားတယ်.. .ရေထဲပေါ့ပါးစွာကူးနိုင်အောင် အ၀တ်အစားအပိုအလျှံ ဖယ်ပစ်တယ်၊ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ကိုထောပတ်ဆီတွေလူးတယ်။ သင်္ဘောနဲ့ ဝေးနိုင်သမျှဝေးအောင် ခုန်ပြီး အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါဟာမဟာဇနက္ကမင်းသားရဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာကျဆုံးခြင်းမရှိဘူး။ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိဘူး..
သေခြင်းတရားဆိုတာမရှိဘူး၊ အောင်မြင်အောင်ကျိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးဘဲရှိတယ်။
ကျွန်မလည်း နောက်ထပ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြမယ်နော်..။ကြားဖူးပြီးသားတွေ ပါဘဲနော်..။
တစ်ခါတုံးက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့သားလေးကို လက်ဆွဲပြီး ဂန္ဒီကြီး ဆီကို
“ဂန္ဒီကြီး… ကျွန်မသားလေး က အချိုတွေ သိပ်စားတယ်။ ကျွန်မလဲပြောတာပဲ… မရဘူး။ ကလေးက စားမြဲ စားတာပဲ။ အဲဒါ ဂန္ဒီကြီး ဆုံးမပေးပါအုံး ”ဆိုပြီး လာပြောတယ်။
ဂန္ဒီကြီး ကအမျိုးသမီးကိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြည့်ရင်း..နဲ့ ”ကောင်းပါပြီ….နောက် တစ်လလောက် နေမှ ပြန်လာခဲ့”
ဒီလိုနဲ့ တစ်လလောက်ကြာတော့ အဲဒီအမျိုးသမီး နဲ့ သူ ကလေး က ပြန်ရောက်လာပြန်တယ်။
အဲဒီတော့မှ ဂန္ဒီကြီးက ကလေးကို ကြင်နာစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီး“သားလေး… အချိုတွေ သိပ်မစားနဲ့ …..” လို့ ရိုးရိုးလေးပဲပြောလိုက်တယ် ။
အဲဒီတော့ ကလေးလေး က ရွှန်းရွှန်းစားစား ပြန်ကြည့်ပြီး “ဟုတ်ကဲ့” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
အဲလိုနဲ့ ကလေး အမေက အံ့သြပြီးစိတ်ဆိုးမိတာပေါ့”ဂန္ဒီကြီးရယ် ဒါလေးပြောတာများ အရင်လတည်းက ကျမလာကတည်းကပြောလိုက်ရောပေါ့” လို့ ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။
အဲဒီတော့မှ ဂန္ဒီကြီးက “ငါလည်း အရင်တုံးက အချိုတွေသိပ်စားတယ်… ဒါပေမယ့် အရင် တလက စပြီး ငါအချိုတွေ မစားတော့ဘူး… ရှောင်လိုက်ပြီ… ဒီကလေးကို အချိုမစားနဲ့ လို့ ပြောဆို ဆုံးမဖို့ဆိုတာက ငါက အရင်ဦးဆုံး အချိုမစားတဲ့သူ ဖြစ်မှရမယ် လေ…။”
ကဲ … ဘယ်လိုလဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ … ပုံပြင်လေးကပြောထားတာတော့
သူများကို ဆုံးမပြုပြင်ပေးချင်ရင် အရင်ဆုံးကိုကိုတိုင်လည်းပြန်ဆုံးမ ပြူပြင်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့
အကြောင်းလေး၊မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ဖို့ လိုတဲ့ အကြောင်းပေါ့….နော်…
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရိုသေလေးစားမှုနဲ့ တခြားလူကကိုယ့်ကိုရိုသေလေးစားဖို့အတွက် ဥာဏ်ပညာထူးချွန်ထက်မြက်နေဖို့နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေဖို့ ရုပ်ရည်ချောမောဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒေါ်ရွှေပြောချင်တာကို ကျွနုပ်ကြောင်ကြီး အမုန်းခံပြောလိုက်မယ် “သဂျီးကောင်းကောင်းနေ”
“ငါ့ ” ကိုမှ ဘာကြောင့် …………………….
“ငါ့ ” ကို ဘာကြောင့်ခုချိန်မှ……………………
ဘာကြောင့် “ငါ့ ” မအောင်မြင်တာ……………………………
“ငါ့ ” ကြောင့်လား………………………….
“ငါ ” ဒီကိစ္စမှာ ဘာလုပ်ရမလဲ……
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ” ငါ ” ဘာတွေ သင်ခန်းစာရလိုက်သလဲ………’
အခြေအနေပြန်ကောင်း လာအောင် ” ငါ ” ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ…
– ဒီလုပ်ငန်းကို “ငါ” ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကိုင်မလဲ…
– အများသူ “ငါ” လူ တွေလို ………………
– “ငါ” လည်း အရင်တုံးက အချိုတွေသိပ်စားတယ်…………….
– “ငါ ” က အရင်ဦးဆုံး အချိုမစားတဲ့သူ ဖြစ်ရမှာ ………………
“ငါ” ကိုယ် “ငါ” ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့ ဘဲလိုပါတယ်။ ……………..
မနေ့ က ‘ငါ” ထက် ဒီနေ့ “ငါ” ပိုကောင်းရမယ် …………….
– “ငါ” နဲ့ ငါ သာ နှိုင်းစရာ …………….
– `ငါ`တိုးတက်ဖို့ …..
– `ငါ ငါ့ဆွေမျိုး ငါ့လူမျိုး ` ကောင်းစားဖို့ ……..
– ´ငါ` ပြီးတော့ `ငါ` ………………….
– `ငါ` ………….
– `ငါ` …………
– `ငါ` ………..
– ` င …..ါ ` …….
– င ……………. င ……………. c ……………o
ကျွန်မလဲ ကိုယ့် ကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့် ရုပါ ဦးမယ်။
လူစွမ်းကောင်းတော့မဖြစ်ချင်ပါ။
သာမန်လူဘဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဘ၀ကို ပျော်လို့ ပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့ဘ၀မှာ၇ှင်သန်နေထိုင်ရတာကိုနှစ်သက်တာလဲ ပါတယ်။
ဘယ်လိုလူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ဘ၀မှာ ဘဲနေနေ
လိမ္မာတဲ့မြင်းက အစီးခံရတယ် ရိုးသားတဲ့လူက အခိုင်းခံရတယ်
ငါနင့်ကို ထိခိုက်အောင်ဘာလုပ်ခဲ့လို့ နင်ကဘာကြောင့်ငါ့ကိုမှ…………………….
သူများတွေ တောင် လုပ်နေကြ အောင်မြင်နေကြ တာပဲ
ငါကော ဘာလို့ လုပ်လို့ မဖြစ်ရမှာလဲ
ငါ လုပ်သလို မလုပ်နဲ့၊ ငါပြောသလို လုပ် ဆိုတာလေး သွားသတိရမိတယ်။